ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा-सीआईबीले अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन किन भयो फिर्ता ? | News Dabali
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा-सीआईबीले अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन किन भयो फिर्ता ?
January 12, 2022 | 7:56 am
अब मुद्दा दर्ता अन्योल
मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हदम्यादको अघिल्लो दिन पारेर सरकारी वकिल कार्यालयले सीआईबीको सो प्रतिवेदन फिर्ता गरिदिएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा ३२ बुँदे निर्देशन र प्रतिप्रश्न गरेर प्रतिवेदन फिर्ता गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न र प्रमाण बलियो बनाउन भन्दै फिर्ता पठाइएको जनाएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले सरकारी वकिलले पठाएको प्रश्नको उत्तर दिएपछि थप अध्ययन गरेर अदालत जान सकिने बताए । यता सरकारी वकिल कार्यालयले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाएको प्रतिवेदनको सीआईबीले जवाफ पठाएपछि पनि मुद्दा दर्ता हुने या नहुने यकिन छैन ।
सरकारी वकिल कार्यालयकै समन्वयमा सीआईबीले प्रतिवेदन बनाएको थियो । तर, एकाएक मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हद म्यादको अघिल्लो दिन सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन फिर्ता पठाउनुलाई रहस्यमय ढंगबाट हेरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ताको दायरामा नपरेका चार पूर्वमन्त्री, पूर्व मुख्यसचिव, बहालवाला न्यायाधीशलगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने सीआईबीको निष्कर्ष थियो । साथै बालुवाटारको हडपेको हालको बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गर्दै सोहीबराबर बिगो दाबी हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले सरकारी जग्गा आफ्ना आफन्तका नाममा बकस गरेको समेत भेटेको थियो । मालपोत कार्यालयका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्द शर्मा रेग्मीदेखि युक्तप्रसाद श्रेष्ठसहित पाँच कर्मचारीले सरकारी जग्गा बकसपत्र गरेर पास गरेको भेटिएको थियो । बुहारी, श्रीमती, बहिनी, साढुदाइ, साढुभाइका नाममा जग्गा पास गरेको अनुसन्धानमा खुलेपछि सीआईबीले मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
महानिर्देशक शर्माले बुहारीलाई बकसपत्र गरेर दिएको भेटिएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन मालपोत कार्यालय अधिकृत कलाधर देउजाले आफ्नै साढुभाइ इन्द्रबहादुर क्षत्रीको नाममा नामसारी गरेको पाइएको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन मालपोत कार्यालयका कर्मचारी युक्तप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नी श्रीमतीको नाममा जग्गा ८५ हजार मोठ राखेर बकस दिएको भेटिएको छ । श्रेष्ठले आफ्नै बहिनीको नाममा पनि बकसपत्र गरेर जग्गा दिएको भेटिएको छ ।
बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको उजुरीपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदा त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव त्रिताल नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् । त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै त्रुटिपूर्ण र कानुनविपरीत भनेको थियो ।